केन्टकी र भर्जिनीयाको नतिजा : राष्ट्रपति ट्रम्प ओरालो लागेकै हुन त ? - Durbin Nepal News
केन्टकी र भर्जिनीयाको नतिजा : राष्ट्रपति ट्रम्प ओरालो लागेकै हुन त ?
जाङ्बु शेर्पा-दूरबिन नेपाल २३ कार्तिक २०७६, शनिबार १७:०१
जाङ्बु शेर्पा-दूरबिन नेपाल
लवक, टेक्सास : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत सोमवार उनको पार्टी रिपब्लिकनको ‘गढ’ केन्टकीमा सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका थिए, ‘यदी केन्टकीमा मार्ट वेविन पराजित भए रिपव्लिकन पार्टी विश्वमा पराजय भएको हुनेछ ।’ राष्ट्रपति ट्रम्पमा एउटा विश्वास थियो । केन्टकीमा आफ्नो उमेदवार हार्दै हार्दैनन ।
तर भोली पल्ट केन्टकीको गभर्नर पदका लागि भएको निर्वाचनमा वेविनलाई डेमोक्रयाट एन्डी बेशियरले पाँच हजार अन्तरमा हारको स्वाद चखाइदिए । यो नजिताले ट्रम्पको विश्वासमा ठूलो चोट पुगेको अनुमान गरिएको छ । यस्तै ह्वाइट हाउसको दैलोमा रहेको भर्जिनियामा पनि रिपव्लिकन यस पटक चिप्लिएको छ । भर्जिनिया र केन्टकीका जनताको मतका कारण अहिले रिपव्लिकनलाई घोत्लिन बाध्य पारेको छ । अर्को तर्फ रिपव्लिकन किल्लामा धावा बोल्न सफल भएकोमा डेमोक्रयाट उत्साहित बनेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी मैदानमा उत्रदै छन् । राष्ट्रपति निर्वाचन भन्दा ठिक १२ महिना अगाडि भएको निर्वाचनको नतिजाले के संकेत गर्छ अहिले नै ठोकुवा गर्न हतार हुन्छ । अमेरिकी राजनीतिका धुवाँधार विश्लेशकहरुले पनि अहिले नै हतोत्हासित वा उत्साहित हुन हतारो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अहिलेको अमिरिकी राजनीति राष्ट्रपति ट्रम्पमाथिको महाअभियोग वरपर नै घुमिरहेको छ । कतिपय परम्परावादी सोच भएका रिपव्लिकन नेताले महाअभियोगले निर्वाचनको मैदानमा डेमोक्रयाटहरुलाई पछार्ने एउटा माध्यम हुनसक्ने वताएका छन् । यस्तै डेमेक्रयाटहरुले ट्रम्पलाई महाअभियोगको परिवन्ध भित्र बाध्ने रणनीतिमा छन् । यो अमेरिकी राजनीति इतिहासमा नौलो घटना हो ।
प्रसंग फेरी मंगलवार कै चुनाव तर्फ फर्कौ, सायदै रिपव्लिकन उमेदवार मार्ट वेविन आफैले सोचेका थिए होलान की बुधवार विहान हुदै गर्दा केन्टकी राज्य सरकार हाक्ने उनको यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने छ । त्यही आत्मविश्वासले पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका हुन केन्टकी गुम्यो भने रिपव्लिकन विश्वमा उठ्दैन । डेमोक्रयाट उमेदवार एन्डी सँग पाँच हजार मत अन्तरले पराजित हुदा पनि निवर्तमान गर्भनर वेविनलाई नतिजा स्वीकार्न निकै गाह्रो भयो । उनले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउदै पुन मतगणनाको अपिल गरेका छन् । निर्वाचन विश्लेषहरुले भने गणनालाई जती दोहोर्याए पनि नतिजा उल्टन नसक्ने बताउदै आएका छन् ।
रिपव्लिकनको पराजयमा जे जस्तो विश्लेषण आए पनि जनमतले सधै एउटै बाटो मात्र पहिल्याउदैन भन्ने सन्देश भने दिएको छ । यसको अर्थ डेमोक्याटहरुको पक्षमा जनमत उल्टियो भन्ने पनि होइन । केन्टकीमा रिपव्लिकनका गढ मानिएका र परम्परागत सोच भएका धेरै काउण्टीका ग्रामिण भेगका जनतताहरु सन् २०१५ को राष्ट्रपति चुनावमा ट्रम्पलाई जस्तै यस पटक मत खसाल्नतर्फ खासै आकर्षित भएनन् । स्थानिय सञ्चार माध्यमको भनाइलाई आधार मात्रे हो भने डेमोक्रयाट उमेदवार एन्डी बेशियरले मेडिकेडका लागि आवश्यकताहरू स्थापित गर्न खोजे, जसको परिणामस्वरूप वेविन कार्यकालमा स्वास्थ विमा गुमाएका हजारौं केन्टकीहरू बेशियर तर्फ आकर्षित भए।
वेविन कार्यालयमा आउनुभन्दा अघि केन्टकीको एउटा सबैभन्दा राम्रो अफोर्डेबल केयर ऐन ( ओबामाकेयर जस्तै ) थियो। यसले डेमोक्रेटका बेशियरको नेतृत्वमा मेडिकेडको विस्तार पनि गर्यो । यस मुद्दाले नै केन्टकीबासी र मार्क वेभिनविचको दुरी वढ्दै गयो । जसको नतिजा गत मंगलवारको निार्वाचनावाट भने पोखियो । अर्को पाटो खास गरि उनको प्रशासनले मतदाताको निम्ति खासै उदाहरणि काम पनि केही गरेन ।
तर भर्जिनियाको कहानी भने भित्रै छ । स्वयं भर्जिनियालगायत विभिन्न अमेरिकी राज्यहरुमा वन्दुककै कारण एक पछि अर्को नर संहार हुदै गयो । हतियार उन्मादवाट आजिद अमेरिकी जनतामा वास्तवमै हतियार नियन्त्रण सम्वन्धि कानुनको अभाव खड्किरहेको महशुस गरिरहेका थिए । भर्जिनियाको निर्वाचनमा भने डेमोक्रयाटसहरुले हतियारमाथिको वहस वास्तवमै पेचिलो वनाउदै गए र निर्वाचनको अन्त्यमा त्यसले सकरात्मक रुप पनि लियो ।
यस पटकको निर्वाचनमा डेमोक्रयाटले रिपव्लिकनको केही निर्वाचन क्षेत्रमा कव्जा जमाए पनि मिसिसिप र लुसियानाजस्ता रेड स्टेटहरुमा रिपव्लिकनले आफ्नो प्रभुत्व कायमै राखेका छन । गर्भनरमा वेभिनको पराजय भए पनि कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले लामो समयदेखि केन्टकी राज्यवाट सिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्दे आएका मिच म्याकोन्नको राज्य भएकोले पनि राष्ट्रपति निर्वाचन सम्ममा मतदाता पूरानै लयमा फर्कनसक्ने वताउदै आएका छन । कारण म्याकोन्नले आरामसँग पटक–पटक केन्टकीको चुनाव जित्दै आएका छन । यसर्थ म्याकोन्न त्यहाँ हुनुमा ट्रम्पले एउटा विश्वासको आधार वनाएका छन् । विश्लेषहरुले डेमोक्रयाटसहरुले विजयी उत्सव भन्दा बढी जनताका आधारभूत आकांक्षाहरुलाई संबोधन गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन अब एक वर्ष बाँकी छ । यो अवधिमा समय चक्रसँगै मतादाताको मनोभावमा पनि परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसो त राजनीतिमा समयको सिमारेखाभित्र संवेदनशिल भएन भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा फर्केर टच डाउन हुन पनि सक्छ । उमेरको कारण भावआवेशमा राष्ट्रपति ट्रम्पले केन्टकी गुम्यो भने विश्वमा रिपव्लिकन हार्छ भने पनि यो उनीहरुका लागि सबै भन्दा ठूलो पराजय भने होइन । तर अर्को बर्षको नोभेम्वरका लागि भने शुभ संकेत भने होइन ।
२३ कार्तिक २०७६, शनिबार १७:०१ मा प्रकाशित